Wararka Maanta: Khamiis, July 12, 2012-Kooxo burcad ah oo Duleedka Magaalada Gaalkacyo ka Afduubay Samafalayaal Kenya u dhashay iyo iyo Dhakhtar Soomaaliyeed
"Wararka aan helanayno waxay sheegayaan in laba Kenyan iyo dhakhtar Soomaali ah ay afduubeen kooxo burcadbadeed ah, balse weli waxaa socda baaritaanno lagu raadinayo kooxahaas," ayuu yiri Aadan Warsame oo ka mid ah saraakiisha booliiska Puntland ee magaalada Gaalkacyo.
Maxamed Ciise ayaa sheegay in weerarka lagu afduubay saddexda ruux ay ku dhaawacmeen laba ka tirsan ciidamada booliiska oo ilaalo u ahaa. Iyadoo labada samafale ee Kenyanka ah iyo dhakhtarkuba la sheegay inay u shaqeynayeen hay'adda International Aid Services (IAS).
Hay'adda IAS oo fadhigeedu yahay dalka Sweden ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in saddex ruux oo Kenyan ah laga afduubay hay'adooda, iyadoo aysan jirin cid sheegatay weli inay mas'uul ka tahay afduubkaas.
Afduubyada ka dhaca gudaha Soomaaliya ayaa inta badan lagu eedeeyaan inay mas'uul ka yihiin kooxaha hubeysan sida bucadbadeedda iyo Al-shabaab oo diidan dowladda Soomaaliya iyo maamullada dalka ka jira.